DISTRIKAN’I BEKILY : Dahalo miisa 03 maty, avotra ireo vehivavy 02 nalaina an-keriny
Araka ny loharanom-baovao avy eo anivon’ny Zandarimariam-pirenena, omaly teo am-panoratana ny lahatsoratra dia vehivavy roa indray no tratry ny fakana an-keriny "Bohiry" nataon’ny dahalo miisa 5 mitam-basy sy fitaovam-piadiana mahery vaika tao Antsarety, fokontany Ampandrandava, Kaominina Beraketa distrikan’i Bekily, ny faha 11 febroary 2020 tokony ho tamin’ny 10 ora maraina tany ho any. 13 février 2020
Raha vantany vao nandre izany ny Zandary avy ao amin’ny “ Poste fixe Ampandrandava“ dia niroso avy hatrany tamin’ny fanarahan-dia niaraka tamin’ireo fokonolona, voasoritra tamin’izay fotoana izay fa nihazo an’Andriry ny dian’ireo dahalo. Vokany, teo amin’ny toerana atao hoe Ambatobe Andriry no nifandona ireo dahalo niaraka tamin’ny takalon’aina sy ny Zandary niaraka tamin’ireo fokonolona andaniny. Raikitra ny tifitra vari-raraka. Manoloana ny fahaiza-manaon’ ireto Zandary nanampy ny fokonolona dia avotra soa aman-tsara ireo takalon’aina.
Miisa 03 ireo dahalo lavo nandritra ny fifandonana raha toa kosa ka mbola karohina hatramin’izao ny naman’izy ireo izay tafatsoaka miisa 02. Tsy nisy namoy ny ainy na koa naratra ireo zandary sy ny fokonolona tao anatin’ny fotoanan’ ny ady, nahafa-po ny fiaraha-miasa nentina niadiana tamin’ireto mpaka an-keriny ka nahavelom-bolo ny mponina tao an-toerana ankehitriny.